Sports – Puntland News
Magacyada iyo Sawirada 10 ka Cayaaryahan ee ugu Guryaha qaalisan Caalamka iyo Lacagta ay ku fadhiyaan?
Waxaan idiin soo gudbineynaa aqristeyaal Magacyada iyo Sawirada 10 ka Cayaaryahan ee ka dheesha kubada Cagta ee ah kuwa ugu Guryaha qaalisan Caalamka iyo Lacagta uu ku fadhiyo Guri kasta. Hadaba Waa kuwee 10 kaas Cayaaryahan? HALKAAN RIIX OO KA…
October 1, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
SAWIRRO+WARBIXIN-Kulanka City Vs Liverpool, Halista Agueo, Sturridge oo raadinaya goalkii 1aad iyo arrimo kale
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sabtida soo socota garoonka ku booqan doonta kooxda Manchester City, iyadoo maanka ku haysa inay ilaashato recordka dhanka guulaha ah ee ay ka haysato. HALKAAN KA AKHRISO WARBIXINTA+SAWIRRO-
September 8, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Tababare Antonio Conte ayaa ogolaaday inuu saxiixo heshiis cusub oo sanadkii uu ku qaadan doono aduun dhan 9.5 Malyan oo Pound kadib markii uu helay balan qaad ku aadan in loo hirgalin doono saxiixyada uu bartilmaameedsaday. Agaasimaha Chelsea Marina Granovskaia ayaa…
TOP 5-Shantii goal ee ugu quruxda badnaa ee uu dhaliyey Mohamed Salah.
Kooxda Liverpool ayaa la filyaa in ay saxiixa Mohamed salah ku dhawaaqdo maalinta bari ah ama maalinta khamiista ah kadib markii ay kooxda Roma kala heshiisay qiimaha xiddigan. Salah ayaa noqon doona xiddigii ugu qaalisan ee ay Kooxda Liverpool kala…
Sawir argagax leh-Kani waa daaficii hore ee Real Madrid Raul Albiol oo madaxa laga gooyey madhabbaa
Mid ka mid ah Cayaartoyda Caanka ah ee Caalamka oo dhan laga yaqaan Raul Albiol ayaa sameeyey sheeko layaab leh kadib markii uu bartiisa Instagram soo dhigay Sawir muujinaya isaga oo Madaxa ka Go an. Xidigaan oo hada u dheela kooxda Napoli…
June 18, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
DEG-DEG: Isku Aadka Horyaalka Premier League Xilli Ciyaareedka 2017/2018 Oo Lasoo Saaray, Yaase Ciyaari Doona Isbuuca Koowaad?
Isku aadka Horyaalka Premier League xilli ciyaareedka 2017/2018 ayaa lasoo saaray – maamulka horyaalka ayaana gabi ahaanba min bilow ilaa dhamaad soo saaray. Kulanka ugu xiisaha badan maalinta koowaad waa midka dhexmari doona kooxaha Arsenal iyo Leicester markaas oo wiilasha…
UEFA ayaa ku dhawaaqday inay bixineyso shan abaalmarin oo cusub oo la gudoonsiinayo ciyaartoyda ugu fiican tartamada UEFA eee xilli ciyaareed walba. Abaalmarinadaan waxaa la bixin doonaa marka la bixinayo abaalmarinta sannadlaha ee Xiddiga Sannadka Qaarada Yurub Ee UEFA oo…
Victor Lindelof → Man United, Willy Caballero → Chelsea, Aleksandr Golovin → Arsenal Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay ee Suuqa
Kooxaha ayaa heshiiyada la furi kara xiddigaha iyo kooxohooda heshiis Afka ahna la sii meel dhigi kara laakiin saxiixa ayaan dhici karin ilaa laga gaarayo bisha July1-deeda. Wenger ayaa kooxdiisa ku cadaadinaya in ay u dhaqaaqaan saxiixa xiddigaha reer France…
Leonardo Bonucci → Real Madrid, Alvaro Morata → Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang → Arsenal Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee suuqa
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Real Madrid Alvaro Morata ayaa lagu soo waramayaa in uu doonayo in uu ku biiro kooxda Chelsea (Daily Star). Kooxda Barcelona ayaa diyaarinaysa dalab Dhan 44 Milyan iyada oo ka gudbin doonta xiddiga daafaca uga…
June 5, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Alexis Sanchez → Bayern Munich, Riyad Mahrez → Arsenal, Diego Costa → Atletico Madrid Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qoreen Wargaysyada Caalamku
Kooxaha ayaa heshiiyada la furi kara xiddigaha iyo kooxohooda heshiis Afka ahna la sii meel dhigi kara laakiin saxiixa ayaan dhici karin ilaa laga gaarayo bisha July1-deeda. Kooxda Bayern Munich ayaa ku kalsoon In ay heli doonto saxiixa…
June 3, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Daawo-Cristiano Ronaldo iyo Fábio Coentrão oo tababarkii Real Masaarico u bedeley kee adkaaday.
Kooxda Real Madrid ayaa ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ay isugu diyaarinaysay kulanka xasaasiga ah ee ay sabtida la ciyaari doonaan kooxda Juventus ee ah finalka champions league xilli ciyaareedkan. Xerada tababarka Real Madrid ayay ka dhacday Arin…
Jariirada AS Oo Saadaalisay Shaxda tababare Ernesto Valverde ee xilli ciyaareedka dambe iyo Barca
Valverde ayaa soo bandhigistiisii shalayto waxa uu ku balanqaaday inuu Barcelona gaarsiin doono heer ka sareeya halkii ay hore u gaartay, waxaana la filayaa inuu ka dhex muuqdo suuqa kala iibsiga xagaaga si uu u xaoojiyo kooxdiisa. Jariirada AS ayaa…
Magacyada iyo Sawirada 10 ka Xidig ee ugu fiicnaa khadka dhexe qaarada yurub
Waxaa lasoo saaray qiimeyn lagu Sameeyey 10 ka Cayaaryahan ee ka dheesha khadka dhexe ee ugu fiicnaa dhamaan Horyaalada kala duwan ee qaarada yurub kuwaas oo ahaa kuwii ugu Waxqabadka fiicnaa kooxahooda. Hadaba waa kuwee 10 kaas Xidig? 9. Granit…
Kooxda chelsea oo wadahadalo kula jirta xiddiga khadka dhexe ee kooxda monaco Tiemoue Bakayoko taas oo albaabka ka sii saaray xiddiga jooga dheer ee Nemanja Matic oo laga yaabo in uu jose mourinho kula biiro man United (The Sun). Kooxda…
Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa shalay saxiixay heshiis cusub oo uu laba sano oo kale ku sii joogayo Emarites Stadium kadib markii uu shir adag la qaatay mulkiilayaasha iyo maamulka sarre ee kooxdiisa wuxuuna kalsooni ka helay boodhka…
Miyey Real Madrid Aqbashay Dalabka Inter Milan Ka Gudbisey James Rodrigues
Real Madrid ayaa iska soo diiday dalab ay Inter Milan kasoo gudbisay kabtanka qaranka Colombia James Rodrigue sida uu ku waramay wargeyska AS ee kasoo baxa dalka Spain. Xidigii hore As Monaco waxaa sidoo kale doonaya Manchester United, balse 42…
May 31, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo xidigaha kooxaha ku dhow yaa kamid ah
Kooxaha ayaa heshiiyada la furi kara xiddigaha iyo kooxohooda heshiis Afka ahna la sii meel dhigi kara laakiin saxiixa ayaan dhici karin ilaa laga gaarayo bisha July1-deeda. Kooxda Liverpool ayaa heshiis 2 sano ah u soo bandhigtay xiddiga reer France…
Daawo-Muuqaal naxdin badan iyo xidiga Liverpool James Milner oo Dinosaur ku joogsatay xaaladdiisa caafimaad
Xiddigaha Kooxda Liverpool ee Nathaniel Clyne,james Milner iyo Roberto Firmino ayaa ka soo muuqday xayaysiis ay u samanayee “Nivea Men”. “Nivea Men” ayaa ah wax ay ragu garka ku xiirtayaan waxa ay u samaynayeen xayasiis iyaga oo sidoo kale xayaysiiska…
May 21, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
DEG DEG: Ganaax suuqa kala iibsiga ah oo lasaaray Manchester City
Xiriirka kubada Cagta dalka England ee FA ayaa Ganaax dul dhigay Kooxda kubada Cagta Manchester City Waxaana lagu Ganaaxay in mudo 2 Sano ah aysan soo qaadan karayn Cayaartoyda yar yarka ee lagu Tababaro Xerada Naadigaas. Manchester City ayaa lagu…
Macalinka kooxda kubada Cagta Chelsea Antonio Conte ayaa shaki badan geliyey in ay dheeli karayaan kulanka Horyaalka England ee ay isniinta dheeli doonaan Cayaartoydiisa kala ah N’Golo Kante iyo David Luiz. Antonio Conte oo kahadalayey shir Jaraa id Jimcihii ayaa sheegay in…
Macalinka kooxda kubada Cagta Manchester City Pep Guardiola oo shir Jaraa is qabtay ayaa cadeeyey in Cayaartoydiisa kala ah Sergio Aguero iyo John Stones ay seegi doonaan kulanka Horyaalka England ee ay la dheeli doonaan Crystal Palace. Pep Guardiola oo…
Manchester United ayaa dib u heshay afar ka mid ah xidigahii dhaawacyada kaga maqnaa iyagoo kasoo muuqday tababarka ay kooxda ugu diyaar garoobeyso kulanka lugta hore wareega Semi Finalka tatanka UEFA Europa League. Eric Bailly, Paul Pogba, Phil Jones iyo…
7 da Naadi ee aan waligood u laaban Heerka labaad qaarada yurub oo dhan
Waxaan idiin soo Gudbineynaa aqristeyaal Kooxaha kubada Cagta Caalamka ee tan iyo Markii la aas aasay aan u laaban heerka labaad waxaana kooxahaas ka kooban yihiin 7 Naadi oo dhamaantood ah Wada ah qaarada yurub. Hadaba Waa kuwee 7 daas…
April 29, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Suuqa Kala Iibsiga Ciyaaryahanada-Manchester United __ Joe Hart, Liverpool __ The Hernandez, Diego Coasta __ Chiness
Subax wanaagsan kusoo dhowaada wararka maanta ugu muhiimsan suuqa kala iibsiga iyo sheekooyinka ay soo kooben wargeesyada. Weeraryahanka kooxda Chelsea Diego Coast ayaa si gaar ah ula kulmay wakiilkiisa Jorge Mendes waxaana ay ka wada hadleen wax badan , waxaana…
Waa Kuween 5 Ciyaaryahan ee Taariikhda Premier League Ugu Goalasha Badan
Waxaan idiin soo Gudbineynaa aqristeyaasheena sharafta lahoow Magacyada 5 ta Cayaaryahan ee dhalisay Goolaasha ugu Taariikhda Horyaalka Premier League dalka England iyo sida ay u kala sareen iyo sidoo kale midkasta inta Gool ee uu dhaliyey. FG.Cayaartoydaan waa kuwa u dheeley…
April 28, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Claudio Bravo cabsi ku beeray macalinka kooxda Man city
Goolhaayaha kooxda Mancehster City Bravo ayaa City xaalada kusoo adkeeynkara waxaana la saadaalinayaa inuu garoomada ka maqnaandoono xidigaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkaan. ciyaaryahankaan ayaa soo gaaray dhaawac waxaana laga saaray garoonka kulankii kooxdiisa ay bar baraha la gashay Manchester…
N’Golo Kante oo loo Magacaabay Xidiga Sanadka Horyaalka Premier League
Kubada bur buriyaha khadka dhexe uga dheela kooxda Chelsea iyo Xulka dalka France N’Golo Kante ayaa Goordhow loo Magacaabay Cayaaryahanka ugu fiican dhamaan inta ka dheesha Horyaalka Xiisaha badan ee Premier League. N’Golo Kante oo hada ka tirsan Naadiga Hogaaminaya Horyaalka dalka England…
April 24, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Daawo-Qaabkii uu u dhacay qarixii lala beegsaday ciyaartooyda kooxda Borussia Dortmund.
Bas ay la socdeen ciyaartoyda kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa la xaqiijiyay in qaraxyo lala beegsaday goor dhoweyd oo caawa ah xili ay ku sii socdeen garoonka Signal Iduna Parka oo caawa ay ku lahaayeen ciyaar ay fooda…
April 12, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Daawo-Xogta Ku Aadan Sababta India Aysan Uga Qaybgelin Ciyaaraha Kubadda Cagta.
Waxaan idiin soo gudbineynaa Xubinteenii Xogta dahsoon ee Sportiga caalamka Xogtaas oo dhinacyo walba waxaana Mawduuca Maanta uu yahay Waa Maxay sababtii dalka India u dheeli waayey koobka aduunka. DAAWO
April 10, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Tababare Arsene Wenger ayaa ku wargaliyay maamulka Gunners inuu doonayo heshiis cusub isagoo diyaar u ah inuu sii joogo Emirates laba sanadood. Sportsmail ayaa fahantay in macalinkaan reer France uu maamulka kooxda u sheegay inuu doonayo inuu kordhiyo mudadiisa joogitaanka…
March 30, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1